कृषिमा विदेशी लगानीको विरोध «
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने नेपाल सरकारको निर्णय व्यवसायी र किसानको हितविरुद्ध भएको भन्दै विरोध गरिएको हो ।
डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड र केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी संघ लिमिटेडलगायतका कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउँदै विरोधमा उत्रिएका हुन् । ऐनमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा उद्योगमा ५० करोड लगानी गर्नुपर्ने र त्यसबाट उत्पादित ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने सर्त छ । तर यसअघि पनि विदेशी लगानी खुला गरिएका कतिवटा क्षेत्रमा विदेशी लगानी नेपाल भित्रियो, कति भित्रियो र त्यसले नेपाली उद्योग व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनायो कि नेपाली उद्योगलाई नकारात्मक असर ग-यो भन्ने तथ्यांक न त विरोध गर्नेले दिन सकेका छन्र, न त सरकारले नै ।
कुनै एउटा उद्योग विशेषलाई नेपालमा आउन बाटो खोलेको सन्दर्भमा पनि नेपाली उद्योगीको विरोध देखिएको छ । तर, नेपाली उद्योगी व्यवसाय विदेशी लगानीको विरोधमा बजारमा एकाधिकार जमाउने कि प्रतिस्पर्धी भई उपभोक्तालाई सहज तथा सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय उत्पादन दिन आफ्नो क्षमता बढाउने, यसमा पनि स्पष्ट छैनन् भने अर्कोतिर किसानका आफ्नै पीडा छन् । यसै सन्दर्भमा कारोबारकर्मीहरूले जिल्लास्थित अगुवा किसानसँग गरेको कुराकानीको सार :
सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नु भनेको नेपाली कृषकलाई व्यवसाय छोड भन्नुसरह हो । कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएपछि मुलुकको ठूलो जनसंख्याको आयस्रोत गुम्ने प्रस्टै छ । सरकारको यो निर्णयले सञ्चालनमा रहेका कृषिजन्य उद्योग र किसान विस्थापित हुने अवस्था आउँछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी गर्दा स्वदेशमा सानो तथा ठूलो लगानीका व्यवसाय पलायन बन्छन् । बजार अभावका कारण समय–समयमा समस्या झेल्दै आएको नेपाली कृषि क्षेत्र विदेशी लगानीको सिकार बन्ने अवस्था आउँछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा लाग्ने युवाको संख्या धेरै छ । भोलि गएर उनीहरूको उत्पादन बिक्री नहुँदा सरकारले के गर्छ ? कृषक, व्यवसायी तथा सरोकार क्षेत्रसँग कुनै छलफल र परामर्श नै नगरी किसान र देशको हितविपरीत सरकारले गरेको निर्णयले दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।
पोल्ट्री व्यवसायकै कुरा गर्दा लकडाउन र कोरोना कहरका कारण बजार नपाएको पोल्ट्री क्षेत्र विदेशी लगानीले धराशायी बन्ने देखिन्छ । नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर छ । व्यवसायका यहाँका कृषक सक्षम छन् भने यही क्षेत्रमा विदेशी लगानी केका लागि ? यहाँको उत्पादन प्रशस्त भएर बिक्री नभइरहेको समयमा विदेशी लगानीले व्यवसाय ध्वस्त पार्छ । प्रदेश–१ मा १० हजार परिवार पोल्ट्री व्यवसायमा आबद्ध छन् भने यस क्षेत्रमा ४ अर्ब लगानी रहेको छ । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जानेछौँ ।
विदेशी लगानी भिœयाउँदा ५० करोड रुपैयाँ उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने र उत्पादनको ७० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने ऐन सरकारले ल्याएको छ । लगानी धेरै रहेकाले उत्पादन पनि धेरै हुने देखिन्छ । उत्पादन बढ्दा लागत कम हुने भएकाले यहाँका व्यवसायीले विदेशी लगानीकर्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, जसका कारण उनीहरूको एकलौटी बजार हुने पक्का हुन्छ । नेपालमा काम गरेजस्तो गरेर विदेशी उत्पादनसमेत नेपाल भित्रन सक्ने अवस्था यसले सिर्जना गर्छ । यसको मतलब नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ । सरकारले यसरी नै कृषि तथा पशुपन्छीबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सक्छ ।
नेपाल एक कृषिप्रधान देशका रूपमा चिनिन्छ । कृषिबाटै रोजगारी र समृद्धि हासिल गर्ने सामथ्र्य नेपालमा छ । नेपाल आफैंमा कृषिमा आत्मनिर्भर देश पनि हो । मानो छरेर मुरी उब्जनी हुने उर्वर भूमि नेपालमै छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पनि कृषिबाटै सम्भव छ । किन चाहियो नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ? गाउँदेखि सहरका साना तथा ठूला किसान, उद्यमी, व्यवसायीले आफ्नै ऋण जोहो गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । कृषिमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने, उत्पादनको ७५ प्रतिशत उत्पादन बाह्य देशमा निर्यात गर्ने निर्णयले सामान्य किसानलाई मरेतुल्य बनाउँछ ।
फलफूल, जडिबुटी, मौरीपालन, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय लगायतका निजी क्षेत्रले लाखौं–करोडौंको लगानी गरेर आत्मनिर्भरको बाटो लागेको अवस्थामा कुनै सहकार्य, छलफल, परामर्श, भविष्यमा पार्ने असरलगायतका विषयमा छलफल नै नगरी राष्ट्र र आम किसानहरूको राष्ट्रहितविपरीत भएको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । जुम्लाजस्तो कृषिमा आत्मनिर्भर जिल्लामा वैदेशिक लगानीको कुनै अर्थ छैन । यहाँका किसान, व्यवसायी तथा उद्यमीले स्वदेशी लगानीबाटै जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । लाखौं–करोडौं लगानी गरेका उद्योग–व्यवसाय, कृषि फर्मलाई धराशायी बनाउने गरी वैदेशिक लगानी भिœयाउने गरेको निर्णय जुम्ली किसानलाई मान्य छैन । यो सरासर किसानहरूको शोषण हो । जिउँदै किसानलाई मार्न खोजिँदै छ ।
नेपालमा कृषि पेसा गर्न, किसानको छोरा हुँ भन्न पनि लाज मान्ने परिस्थितिमा दूरदराजका किसानले ऋण जोहो गरेर उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय गरेका छन् । सरकारको सुक्को लगानी कुरेका छैनन् । यस्तो जोखिम मोलेर पनि कृषि कर्म गरिरहेका, स्वदेशमै भविष्य खोजिरहेका युवा उद्यमीलाई वैदेशिक लगानी भिœयाउने निर्णयले हतोत्साहित गरेको छ । त्यसैले पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन । स्वदेशमै केही इलम गर्न खोजिरहेकालाई यस्ता निर्णयले पलायन हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
किसानका हितविपरीत कृषिमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने निर्णयको विरुद्धमा केन्द्रदेखि जिल्लाका उद्योगी–व्यवसायीहरुरूले निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गर्नुपर्छ । कृषिमा वैदेशिक लगानीले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि किसानको छातीमा लात हान्ने गरी भएको प्रयासप्रति सबै किसान उद्यमी कडा भएर अघि बढ्न आवश्यक छ । उता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको अवस्था छ ।
नेपाली किसानले समयमै मल, बीउ, सिँचाइ पाउँदैनन् । घामपानी, असिनाको पीडा खेप्दै कृषि कर्मलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । तर सरकारसँग कहिले झुकेको अवस्था छैन । चालू आवमा मात्रै जुम्लामा सयौं उद्योग दर्ता हुनुले कृषिमा आधारित स्वदेशी लगानी बढ्दै गएको पाइन्छ । जुम्लाको कुरा गर्नुपर्दा स्याउ, सिमी, ओखर, मार्सी धान उत्पादन गर्ने किसान, कृषि उद्यमीलाई सरकारले अपेक्षाअनुसार खास्सै सहयोग गरेको अवस्था छैन । तर आफ्नै लगानीबाट उद्यमशिलतामा जुटिरहँदा पनि वैदेशिक लगानी भिœयाएर नेपाली कृषि क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने निर्णय किसानदेखि उद्यमीलाई मरेतुल्य बनाउनेमा दुईमत छैन ।
म कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी पुँजी नै लगानी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छु । विदेशी लगानी भिœयाउन करोडौं लगानी गर्नुपर्ने, उत्पादनको ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने सर्तमा सामान्य किसान उद्यमी सहमत कदापि हुने स्थिति छैन । यहाँका किसान आफ्नै स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न चाहन्छन् । उद्यमीको मनोकांक्षा विपरीत नै गरिएको निर्णयविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला भएको छ । भलै जुम्लामा आफ्नै लगानीबाट साना उद्योग व्यवसाय सञ्चालन छन् । तर, ठूला–ठूला सहरमा करोडौं, अर्बौं लगानी गरेका उद्योगलाई धराशायी बनाउने भए पनि वैदेशिक लगानीको निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ ।
स्वदेशी उद्योग र किसानलाई सुविधा नदिने तर विदेशी उद्योगलाई प्रमोट गर्ने निर्णयले नेपालका किसान तथा उद्यमी मरेतुल्य हुन्छन् । नेपालमा कृषिका सम्भावना पर्याप्त भए पनि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन तथा प्रशोधनको अभावले कृषि सम्भावना अवसरमा बदलिएको अवस्था छैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याएर किसानलाई मार्नुभन्दा कृषिबाट रोजगार तथा आर्थिक समृद्धि हुने खालका नयाँ योजनामा लगानी गर्न सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्छु ।